tarisa mamwe emhando dzakanakisa dzematehwe ematehwe egaraxy s9
Kuru Nhau & Ongororo Akanakisa ematehwe makesi eSamsung Galaxy S9 uye S9 +
Akanakisa ematehwe makesi eSamsung Galaxy S9 uye S9 +
Taura zvaunogona pamusoro pekureruka kwemakesi akajeka esilicon, ivo kashoma kupa foni yako iwo maratidziro uye vanzwe muruoko iro rakashongedzwa reganda rakamonera. Midziyo yematehwe ndeye Cadillac yeiyo casing art, uye nechikonzero chakanaka - inokwegura zvine mutsindo, inotaridzika premium, uye inosiya yakasikwa, inogutsa kunzwa muchanza.
Pasina mubvunzo kutaura, kana iwe uine foni yekumusoro-soro mazuva ano, ingango gadzirwa kunze kwegirazi, uye, kuburitsa iyo yakakwenenzverwa miviri yemahombekombe mune yero-ing silicone kesi inogona kunzwa sekumhura. Iwe unofanirwa, zvakadaro, sezvo magirazi efoni ari akanaka kusimba uye anowanzo kutsvedza. Sezvo dehwe iri kubvumirana kukuru pakati pekudzivirira uye aesthetics, isu tiri kukomberedza mashoma emhando dzakanakisa dzekuputira mombe dzegirazi rakakosha-y Galaxy S9 uye S9 +.
Mujjo dehwe chikwama chikwama ($ 49.90)
Mujjo yakazara-zviyo zveganda makesi eGirazi S9 / S9 +
Mujjo haasi mutorwa kune yemhando nharembozha, uye semuenzaniso anga achigadzira upscale touchscreen-inoshamwaridza magurovhosi kwemakore apfuura, achinyatso tsanangura kuti inopa imwe yemabhuru makuru emari iri muchikamu. Hunyanzvi ihwohwo hunoendesa kumakesi aMujjo emafoni akakurumbira senge iyo iPhone kana Samsung & apos; s Galaxy S mutsara, uye ikozvino yave nguva yeS9 uye S9 + kuti vatore yavo yekutanga yakazara-zviyo zveganda rakaputirwa.
Yakarongedzwa neJapan microfiber yekudzivirira mabrasion, makesi acho anokodzera segirovhosi, uye inopa yakasimudza 1mm muromo kutenderedza foni kuti iwedzerwe dziviriro. Kunze kwekucheka chaiko kwezviteshi zvese, kuvhurika, sensors uye mabhatani, Mujjo & apos; s makesi ematehwe anochengetedza iwo anotaridzika nekutarisa maringi epurasitiki, toti, kamera uye zvigunwe scanner kuvhura, asi panzvimbo pacho yakagadzira chamfered yeganda mativi ayo anotsvedza zvisina mutsindo mukati. Yese micheto yakaumbwa neyakagwinya polycarb kuti itsungirire iyo kusakara uye kubvarura painogona kusiya zvakanyanya kukanganisa.
Zvino, kuenda kune iyo nyaya yechinhu pachayo. Mujjo anoshandisa yeganda-yakasvinwa dehwe iyo yakamisirwa kuwedzerwa kutsungirira, uye iyo yakazara-tsanga kutaridzika kunosiya kushamisika kunoshamisa, zvese muziso reanoona, uye muchanza. Mujjo anovimbisa kuti 'inopfeka nekushandisa kwese uye inowana yakanaka patina uye polish nekufamba kwenguva,' uye, kutonga kubva kune ayo akafanana kesi kune iyo iPhone, ine poindi. Iwo akazara-zviyo zveganda makesi eGPS yako S9 ari $ 49.90, nepo iyo hombe S9 + inogona kupfeka zvine hunyengeri husingaoneki kwemadhora makumi mashanu nemakumi masere, nekutumirwa pasirese, kana kuburikidza nevatengesi vanotenderwa Rova sosi yekubatanidza kana iwo akanaka machira anouya muBlack, Tan kana 'akashinga Olive,' akakurudzira kufarira kwako.
Pierre Cardin Galaxy S9 yeganda kesi ($ 22)
Pierre Cardin Galaxy S9 makesi
Yakawedzera minimalistic shell, iyo ine mabutiro ayo anokupa iwe kupinda kune foni & apos; s ayo mabhatani uye kazhinji anoita kuti iwe unzwe & ldquo; yakawanda yefoni & rdquo;. Iyo kesi pachayo ine inotonhorera kwazvo, yakasarudzika kutaridzika uye inouya mune matatu akasiyana mavara
Qialino chikwama chikwama ($ 29.99)
Qialino chikwama chikwama
Kurova chiyero pakati pehunhu hweganda nemutengo, isu tine Qialino. Iyo & apos; yakagadzirwa neganda chairo uye inonyatso dhizaina ficha yakakodzera yako yekutanga Galaxy S9 kana S9 +. Iyo inokodzera zvakare kutenderedza foni snug uye ine imwechete kadhi slot, ichiita kuti irege-iyo-gobvu kune wallet kesi.
Burkley Yakatsva Tan Leather ($ 3 9)
Burkley Yakatsva Tan Leather kesi yeGPS S9
Yakagadzirwa neiyo izere gorosi yeTurkey dehwe, iyi Burkley snap-on inoputira kesi inoputira yakapenya yakajeka uye yakasimba polycarbonate chifukidziro ine microfiber lining, kune akanakisa epasirese nyika. Pasina mubvunzo kutaura, sezvo iri & apos; yeganda rechisikigo, Burkley anoyambira kuti ruvara nepatina zvinogona kuchinja nenguva uye kushandiswa, asi izvo & runako rwemakesi ematehwe, uye iyi inouya mune akati wandei mavara akajairika, kusanganisira mamodheru ane snap-on vane makadhi, kana iwe wakadaro.
ios 15 inobuda riinhi
renyeredzi cherechedzo 5 kugadzirisa sprint
yekukurumidza foni charger munyika
Yakanakisa iPhone SE inobata izvozvi
Samsung SM-G870A (inotarisirwa kuve AT & T & apos; s Galaxy S5 Active) inoshanyira iyo FCC
Heano maitiro aunogona kuwana yemahara iPhone 8 64GB kana iwe ukatenga iyo iPhone X kuAT&T
iPhone 13 zuva rekuburitsa, mutengo, maficha uye kudonha
Mashandisiro ekushandisa PlayStation 3 Sixaxis controller neako Android smartphone kana piritsi
Iyo yakashata Galaxy S9 Active iyo isina kumbobvira yavapo ikozvino iri pamutemo pasi pezita rakasiyana
Maitiro ekuti uwane Apple Arcade yemahara izvozvi uye kuti ungamise sei iyo yemahara kuyedzwa